सिद्धान्तहरु सबै चुट्किला भए, चुट्किलाहरु सिद्धान्त भए। कार्यकर्ताहरु हनुमान भए। तब पो एमाले। गुगलमा ‘एमाले’ सर्च गर्ने हो भने यस्ता रमाइला गफ धेरै भेटिन्छन्।
‘सबैलार्इ आफ्नै ब्यथा ठूलो लाग्छ थाहा भएकै कुरा त हो।’
Suvadin Desk 728 0
‘थोते साँइला’मा राजनीतिमा लागेको लिम्बु युवकको कथा छ। कथा पढ्दै जाँदा कता कता कबडि चलचित्रको काजी याद आउँछ । ‘मानसिंहको चैते दशैँ’मा दुईटी स्वास्नी बिहे गरेको मानसिंको कथा छ । ‘हरियो ढुङ्गा’मा भुटानी...
रमण पनेरू 1.4k 0
सम्पूर्ण पाठक वर्गमा स्वागत छ। शुभबिहानी, शुभप्रभात। हामीले अाजदेखि नयाँ श्रृंखला सुरु गरेका छौं। शुभबिहानी। त्यो अन्तर्गत ह्यासट्याग रहेको छ।
यी सबै घटनाक्रमले सत्तामा रहेकाका लागि नकारात्मक र सत्ता बाहिर रहेका अनि नयाँ उदयीमान राजनीतिक दलका लागि राम्रो माहोल बनाएको थियो। त्यसैेले पनि चुनावका प्रारम्भीक नतिजाले नेपाली जनता सबै परम्परागत पार...
रमण पनेरू 951 1
Youth activism and engagement can bring about important social changes that are sometimes left behind. You don’t have to wait to be an adult to be an active member of your community. Your opinion matt...
Vikrant Bhatt 969 0
न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको आदेशले न्यायिक सर्वोच्चतालाई सम्मान गरेको छ। न्यायिक सर्वोच्चता गुम्यो भने अन्ततः त्यसले निम्त्याउने अराजकता हो। कानुन कसैलाई पनि नलाग्नु हो। राज्यका सबै अंग लगभग छिया...
Khilanath Dhakal 51.1k 0
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले शाही आयोग गठन गरी भ्रष्टाचार अभियोगमा देउवालाई जेल हाल्न खोज्दा अदालतले नै आयोग गठन गर्ने अधिकार कार्यकारी प्रमुखको हो भनेर फैसला गरिदिएको थियो। यदि अदालतले त्यो निर्णय नदि...
Khilanath Dhakal 166.6k 0
साधारण मानिस र इमानदार पार्टी कार्यकर्ताहरु चुनावमा पार्टीको टिकट पाउनुलाई पार्टीले गरेको दयामाया, सहानुभूति र पुरस्कारको रुपमा लिने गर्छन्। त्यसैले पार्टीमा दु:ख गरेको, निरन्तर सहयोग र लागि परेको, पा...
Ram Chandra Upreti 511 0
अभिभावकबाटै अवहेलित भ्रष्टाचारविरोधी अभियन्ता शारद...
उनीमाथि भएका अन्यायका अभियुक्तहरू अहिले पनि समाजका उच्च ओहोदामा छन्। कैयौंले तिनीहरूको पनि पूजा गर्छन्। जो पीडित छिन्, उनका वेदनालाई ‘झुठो र कपोकल्पित’ उपमा दिन्छन्। तर, पलपल मरेर बाँचेका आफ्ना विगत स...
Ashok Adhikari 2.3k 1
रामेश्वर खनाल भिन्न स्वभावका छन्। जहाँ जान्छन्, थिति बसाल्न खोजिहाल्छन्। विकृत मानसिकता उनको सत्रु हो। जहाँ सुधारको आवश्यकता देख्छन्, हात हालिहाल्छन्। रोकावट वा दबाब आउन थाल्यो भने उनी त्यहाँ बस्दैनन्...
वीरगन्जमा बसेर निरन्तर काठमाडौंलाई हस्तक्षेप गरिरहेका कोही लेखक छन् भने ती चन्द्रकिशोर नै हुन्। आफूलाई सीमाञ्चलबासी भन्ने उनी सिमानाबाट उत्तर फर्केर लेखिरहेका छन्। धेरैले उनका बारेमा यस्तै टिप्पणी गर्...
Suvadin Desk 3.8k 1
१२ वर्षपछि नेपाल फर्किंदा
'आविस्कार त अरू देशका मान्छेले पनि गरेका छन् नि' भन्दै उनले फेरि मतिर हेरिन्। के भन्ने के थाहै भएन। उनको मुहार निराश नै देखिन्थ्यो। उनि फेरि मेरो स्कुल कलेजको सर्टिफिकेट पल्टाउन थालिन्। म चाहिँ अरू के...
Bikal Dhungel 4.6k 0
महिलाहरूले भ्रष्टाचार गर्न नसक्ने र पुरुषका तुलनामा धेरै कम महिलाहरूले मात्र भ्रष्टाचार गरेको उदाहरण विश्वका अन्य देशका महिला नेतृहरूमा देखिएको । यसरी महिला नेतृलाई जिताए कम भ्रष्टाचार हुने, काममा महि...
भ्रष्ट र अयोग्य व्यक्तिलाई नचुनौं
लोकतन्त्र एउटा सुन्दर पक्ष हो। तर, एक अर्काप्रति विश्वास र सद्भाव कम हुँदै जानुले एउटा कुशल र समावेशी नेतृत्व पाउन कठिन त हुने हैन भन्ने शंका उत्पन्न हुँदै गएको देखिन्छ। भ्रष्ट र अयोग्य व्यक्तिलाई सत्...
Hari Timilsina 4.6k 8
कति सहने भारतीय हस्तक्षेप?
राज्यको नेतृत्व गर्नेहरू विदेशी प्रभुको इसारामा झुमेका कारण उनीहरू केही बोलेनन् भन्दैमा हामी पनि तैं चुप मै चुप हुनु हाम्रो पनि गल्ती हो। के हामीले जनस्तरबाट नै हाम्रो भूमि रक्षाको निम्ति पहल गर्न सक्...
Suvadin Desk 7.7k 29
योग्य, सक्षम र इमानदारलाई नै भोट किन?
हामीले आफू र आफ्नो परिवारको सम्पूर्ण भविष्य नै जिम्मा दिनुपर्ने व्यक्ति गलत भइदियो भने के राजनीतिक दलले हाम्रो भविष्य थामिदेला त? अनि त्यतिबेला आफ्नै पुर्पुरोमा हात लगाएर बस्नेबाहेक हामीसँग अन्य विकल्...
Suvadin Desk 6.8k 6
वैदेशिक सहयोग र हाम्रो समृद्धि
संसारकै द्रूत गतिमा आफ्नो अर्थतन्त्र विकास गरिरहेका भारत र चीनबीचको एउटा सानो मुलुक नेपाल भौतिकशास्त्रको सामान्य प्रिन्सिपल दुई तातोपानीले भरिएको गिलासको बीचमा बरफ नपग्लिरहन असम्भव भएजस्तै असीमित प्रा...
Arjun Subedi 4k 0
‘जनावर’ भन्दा रिसाउँछ, ‘सिंह’ भन्दा खुसी हुन्छ
लाइन छोटो छ, तर अर्थ धेरै गहिरो छ, बाँचुञ्जेल उठायो बोझ त्यो किलले र प्रशंसा मान्छेहरुले तस्बिरको गर्दै।
Ashok Adhikari 3.4k 0
एउटा छोराको लेख
जब टेलिभिजनमा प्रधानमन्त्री तथा नेताहरुले भाषण गर्नुहुन्थ्यो, म चाखपूर्वक हेर्थे। अर्कोतर्फ घरको माहोल पनि राजनीतिक नै थियो। मेरो बुवा नेपाली कांग्रेसको जिम्मेवार कार्यकर्ता हुनुहुन्थ्यो।
Sughosh Dhungel 4k 60
मेरो प्रश्न छ। तपाईं किन नेता बन्न चाहनुहुन्छ? मैले समाजमा देखेको र भोगेको आधारमा मानिस दुई वटा कारणले नेता बन्न चाहन्छन्। पहिलो कारण नेता भएपछि पहुँच बढ्ने, मानसम्मान पाइने, बिना लगानी सजिलै आर्थिक आ...
Ram Chandra Upreti 4.2k 7
नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपतिले जारी गरेका आदेशहरूलाई त्यहाँको अदालतले संविधान र कानुनविपरीत भन्दै पटक–पटक रोकिदिएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपतिले अमेरिकाको संविधान र कानुन नजानेका होइनन्। उनले आफू अनुकूल...
Kapildev Dhakal 6.9k 13
सुरक्षा बलजस्तो संवेदनशील क्षेत्र राजनितिमा हावी हुँदै गयो भने त्यो सच्चा देशभक्त प्रहरीभन्दा कुनै राजनीतिक दलको प्रहरी संगठन बन्छ। राजनीतिक दलको प्रहरी संगठन भयो भने त्यसले जनताको पक्षमा निष्पक्ष ढंग...
Suvadin Desk 3.2k 2
प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिमा कार्यकारी निकायले गलत गरेको प्रमाणसहित अदालतले निर्णय दिँदा त्यो कसरी शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तसँग जोडिन्छ? कानुनको कुन धारा र सिद्धान्तका आधारमा कांग्रेस केन्द्रीय समित...
Khilanath Dhakal 10.1k 75
युवाहरूले देशमै केही गर्न सक्दैनन् र?
हाम्रो समाजका मानिसहरूको मनस्थिति नै पढेलेखेका युवाहरू गाउँमा बस्नु हुँदैन भन्ने सोचबाट ग्रसित छ। जब युवा नै आफ्नो गाँउमा छैनन् भने गाँउको विकासमा जति योगदान अन्यले दिन सक्छन्, सायद नै युवाको योगदान अ...
Bhumika Pakhrin 3.5k 19
मलाई लाग्छ, न त न्यूटन जीवनयापनका लागि वैज्ञानिक भए। न त हिटलर नै जीवनयापनका लागि विश्व जित्न तम्सिएका थिए। यो विषयमा धेरै बोल्नुभन्दा पनि काम गरेर देखाउने मेरो लक्ष्य हो। एक सयभन्दा धेरै हिमाल हाम्र...
Bimarsha Uprety 6.8k 5
गिरिजाबाबुले भने, ‘हम चले’
पौने ९ बजेतिरको कुरा होला। हवाइजहाजको आवाज आयो। ‘हम चले’ भनेर गिरिजाबाबु जानुभो। मेरो ड्युटी ‘रेस्क्यू अपरेसन’ थियो – मुख्य रुटमा गाडी बिग्रिए उद्दार गरेर जानुपर्ने। धन्न, कतै केही भएन। साँझ दार्जिलिङ...
Suvadin Desk 5.5k 0
संविधान संशोधन नमान्ने भए कमल थापाले सरकार छोडे हु...
यो संविधान बिरोधी भन्ने, एक दिन संसदमा छलफल गर्न दिन्छु भन्ने, यो के मजाक गरिरहेको एमालेले? नेपाली कांग्रेसलाई संसदीय व्यवस्थाको पाठ सिकाउन खोजेको हो? पर्दैन सिकाउन नेपाली कांग्रेसलाई। माओवादी, न एमाल...
Dr. Shekhar Koirala 13.6k 84
संविधान संशोधन नमान्ने भए कमल थापाले सरकार छोडे हुन्छ